Iindaba-Inkampani yethu iqinisekiswe ngempumelelo malunga noMNikezi oPhicothiweyo kunye ne-BSCI-AUDITED
Inkampani yethu iqinisekiswe ngempumelelo malunga noMNikezi oPhicothiweyo kunye ne-BSCI-AUDITED
Ekupheleni kuka-2019, ofisi Shijiazhuang inkampani yethu ungenisa abasebenzi uhlolo SGS inkampani Tianjin Branch, Benza uphononongo on-site kwinkampani yethu, Review umxholo ubhekisele kwishishini mvume, isatifikethi sokubhalisa lwamashishini kumazwe angaphandle, imali yonyaka.
Isiteyitimenti, indawo yeofisi, ulwakhiwo lombutho wenkampani, inkqubo yolawulo kunye neQC syeterm. Ukongeza, ikwavavanye iimveliso zethu nganye nganye.Iiglavu zezikhumba zeegusha, iiglavu zezimvu zeegusha, iminqwazi yezikhumba zeegusha, iibhutsi zezikhumba zabantwana, iiragi njalo njalo. uqinisekiswe ngempumelelo, kwaye ufumane ingxelo yokuqinisekiswa kwe-SGS kamva.
Kwangelo xesha, umzi mveliso weiglavu zokwenza iigusha inkampani yethu etyale imali kuyo ihlolwe kunye ne-BSCI kanye ngonyaka.UMnumzana Benny Wang, Umphathi jikelele wenkampani, wafika umzi-mveliso ukukhapha abasebenzi bokuhlola ukuvavanya.
Abahloli benza udliwanondlebe nomsebenzi ngamnye, udliwanondlebe ubhekisa kwinkqubo yezokhuseleko yezemisebenzi, inkqubo yoqeqesho lwabasebenzi, inkqubo yemivuzo yabasebenzi, indawo yokusebenza kunye neminye imiba, kananjalo benze uthotho lovavanyo kweminye imiba yomzi mveliso. UKUHLOLWA ngo-2020 kwakhona kuqinisekiswe ngempumelelo, kukwiBanga C.
Inkampani yethu inyanzelisa ukwenza ezi ziqinisekiso zimbini, Sicinga ukuba luxanduva lwethu, luxanduva eluntwini kunye nokuzibophelela kubo bonke abathengi bethu. Ingcamango yethu yemveliso kukuqhubeka nokuphucula, ayisiyiyo kuphela ekufuneni ubulula kunye nobuhle, kwanobugcisa obugqithisileyo.Njengeiglavu zethu zezimvu zeegusha ezivela kumthombo, sisebenzisa kuphela.
I-Merino isikhumba semvu sokushuka kwendalo, ayinayo i-formaldehyde kunye nezinye izinto eziyingozi. Siza kwenza zonke iinkcukacha kakuhle.Sikwanyanzelisa ukuba senze kakuhle emva kweenkonzo zokuthengisa, Siyathembisa ukuba unayo nayiphi na iiglavu enesiphene, Siza kuyenzela entsha simahla!
AmaNqaku: Ngenxa yeemfihlo zorhwebo, kuphela yinxalenye yokuqulathiweyo ebonisiweyo. Nceda uqonde.